Diso aho "Tsy tadidiko" rehefa manamboatra PST /OST fisie Ny hatao? - DataNumen
Ity lesoka ity dia midika hoe ny PST /OST Ny rakitra dia lehibe loatra ary ny habaka fahatsiarovana ao amin'ny rafitrao dia tsy ampy hamerenana azy io. Amin'ny ankapobeny, ity lesoka ity dia miseho amin'ny solosaina ambany sasany, ary ny PST /OST lehibe kokoa noho ny 50GB ny rakitra.
Ireto misy vahaolana vitsivitsy momba ny lesoka "Tsy tsaroana":
Apetraho amin'ny solosaina hafa ny vokatray miaraka amina fikirakirana fitaovana tsara kokoa ary andramo indray. Soso-kevitra ny hampiasa solosaina 64bit miaraka amina memoara mihoatra ny 64GB sy 64bit Outlook napetraka mba hanaovana ilay asa. Ho an'ny 64bit Outlook, azonao atao ny mampiasa 64bit DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery izay hampiasa tanteraka ny fahatsiarovana ao amin'ny rafitrao.
Hamarino tsara fa ampy ny habaka kapila maimaim-poana ao amin'ny C: drive. Windows dia hampiasa ny habaka kapila ao C: mitondra fiara ho fahatsiarovana virtoaly. Raha tsy ampy ny habaka kapila maimaim-poana amin'ny C: drive, dia hahita olana toy izany koa ianao. Soso-kevitra ny hitazona farafahakelin'ny kapila maimaim-poana 100GB farafahakeliny amin'ny C: drive-nao.
Na azonao ampiasaina DataNumen File Splitter hampisaraka ny PST /OST apetraho amin'ny sombin-javatra maromaro, manodidina ny 10GB eo ho eo ny habeny. Mihazakazaha avy eo DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery hanamboatra ireo PST /OST ataovy tsirairay avy na amin'ny andiany amin'ny alàlan'ny "Batch Repair". Na izany aza, amin'ity vahaolana ity dia mety ho very data vitsivitsy ianao rehefa mizara ny PST /OST rakitra ary ny mailaka sasany dia ao amin'ny fari-tanin'ny rakitra, saingy azonao atao ny misoroka ny lesoka "Out of memory" ary sitrana most ny data.
64bit, DataNumen File Splitter, toerana malalaka, Tsy tsaroana, Saraho